5 सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू पेरिस बाट रेल यात्रा गर्न | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
(पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: 27/05/2022)
केही दिनको लागि टाढा रही सोच? योजना के पेरिस बाट रेल यात्रा गर्न केही दिन यात्राको? फ्रान्सेली रेल छिटो हो, सजिलो, र पर्यावरण-मैत्री बाटो फ्रान्स मा वरिपरि प्राप्त. संग एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्, तपाईं कुनै जोडी शुल्क संग मिनेटमा बुक गर्न सक्षम, धेरै! कुल!
तपाईं पेरिस देखि एक घाम Getaway खोजिरहेको भने, Marseilles जाने ठाउँ छ. राम्रो हुनत छिटो कार्य, द घाम दिन चाँडै अन्त आउँदै गरिनेछ. Marseilles नक्सामा टाढा देखिन्छ तर Marseilles गर्न पेरिस मात्र हो 3.5 को TGV संग रेल द्वारा घण्टा. मार्सिल्स, मा प्रोभेन्स-आल्प्स-कोटे Azur क्षेत्र, फ्रान्सेली रिवेरा को भाग हो. धेरै मानिसहरू Marseilles कोर्सिका द्वीप आफ्नो बाटो मा चाँडै भ्रमण तर शहर आफैं अन्वेषण गर्न एक सुन्दर ठाउँ छ.
द मौसम Marseilles ठूलो छ प्लस त्यहाँ कुराहरू धेरै छन् मा हेर्न र शहरमा गर्न. केन्द्रीय Marseilles शहर को ठाँउहरु को सबै भन्दा केंद्रित, जस्तै सुरम्य पुरानो पोर्ट रूपमा. मार्सेइल विशाल आयताकार पोर्ट लागि व्यापार गरिएको छ 2,600 वर्ष र एक दृष्टि भन्दा सारा जिल्ला बढी छ.
उद्योग लामो समयदेखि आधुनिक डक्सबाट डकमा सर्दै आएको छ उत्तर, र पुरानो पोर्ट मा डुङ्गा को सबै भन्दा खुशी को लागि हो.
भन्न अनावश्यक, द दृश्यहरू यहाँ बाट चिबुक-गिर छ.
मार्सिलेस अवस्थित छ 773 पेरिस को दक्षिण मी. Marseilles गर्न पेरिस रेल यात्रा गर्न यात्रा धेरै सजिलो छ. पेरिस बाट मार्सिले सीधा रेलहरु पेरिस गारे डे लियोन को यात्रा को लागी छोड्छन् 3.5 घण्टा. तपाईं Marseilles यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने गर्मी सप्ताहन्तमा हामी सुझाव दिन्छौं रेल टिकट बुकिंग राम्रो अग्रिम.
अब, रोयुन गरेको सडकमा थुप्रै pedestrianized रहनेछ, शहर मार्फत टहलने साँच्चै समय फिर्ता stepping गर्न akin महसुस भनेर अर्थ. कुनै कार, cobbled सडक खण्डहरू, एक बंदरगाह क्षेत्र, र पनि एक प्राचीन जिल्ला: के प्रेम होइन? जून-सेप्टेम्बर को दौरान Rouen भ्रमण र तपाइँ पनी एक नि: शुल्क रोशनी को लागी उपचार गरिनेछ क्याथेड्रलमा प्रदर्शन जब सूर्य अस्ताउँछ र साँझ अस्ताउँछ.
लियोन अवस्थित छ 463 पेरिस बाट मी, पेरिसबाट यस दिनको यात्राले तपाईंलाई फ्रान्सको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो शहरमा परिचय गराउनेछ जुन पेरिस भन्दा धेरै भिन्न छ. लियोन गर्न पेरिस रेल छिटो छ द्वारा यात्रा गर्न यात्रा. लियोन बिदा गर्न पेरिस गाडिहरु पेरिस Gare de लियोन एक लागि प्रतिघण्टा यात्रा को आसपास2घण्टा, रेल आधारमा.
पुरानो पोर्ट देखि, एक मात्र राजसी टावर पराउँछु गर्न सक्नुहुन्छ, शहर को अभिभाबकहरुको. एटलांटिक सामना, तिनीहरूले शताब्दीयौंदेखि मार्फत लारोचेले शक्ति र धन साक्षी गर्नुभएको. यी समुद्री fortifications, मध्य युग र आज ऐतिहासिक स्मारक रूपमा वर्गीकृत निर्माण, तपाईं लारोचेले भ्रमण गर्दा बाहिर खडा. बंदरगाह प्रवेश प्रत्येक पक्षमा, को सेन्ट-निकोलस टावर, र दल को टावर एक पर्खाल गरेर जोडिएको छ. अन्तमा, त्यहाँ लालटेन को टावर छ, पहिले एक लाइटहाउस र जेल.
ला रोशेल अवस्थित छ 469 पेरिस बाट मी. पेरिसदेखि ला रोशेलको रेलमा यात्रा गर्न यात्राहरू सजिलो छ. लारोचेले बिदा गर्न प्रत्यक्ष TGV रेल पेरिस Gare de Montparnasse देखि र मात्र लारोचेले गर्न पेरिस लिङ्क3घण्टा.
ड्यूविल को नोर्माण्डी तट मा पाइन्छ, Trouville को लागी र दक्षिण पश्चिम को Honfleur. 'नोर्मान्डी रिभिएरा' डेभभिलको एक अंश एक मनमोहक समुद्रतट शहर हो. यो एक ठूलो समुद्र तट छ, ठूला ठूला भवनहरू, ठूलो पसलहरूमा, र वार्षिक फिलिम तिहार. यसको प्रख्यात रेस ट्र्याक उल्लेख नगरी, गल्फ कोर्स साथै क्यासिनो. के थप तपाईं चाहनुहुन्छ सक्छ?
डेउभिले पेरिसबाट एक दिन यात्राको लागि एक महान उम्मेदवार हो, तेस्रो नेपोलियनको सौतेनी भाइको दर्शनको रूपमा जीवन सुरु भयो. Trouville को आसन्न शहर देखि, उनले दलदल र टिब्बा देखे र एक दौड ट्र्याक निर्माण गर्ने निर्णय गरे. रेस ट्र्याक र समुद्रको बीचमा सुरुचिपूर्ण विलाहरू बनाइएका थिए र डेउभिलको जन्म भएको थियो.
ड्यूविल स्थित छ 220 पेरिस को पश्चिम मी. ड्यूविल गर्न पेरिस रेल यात्रा गर्न यात्रा साँच्चै सजिलो छ. पेरिस बाट Deauville को लागी सीधा रेलहरु छोड्नुहोस् पेरिस सेन्ट Lazare प्रतिघण्टा रेल स्टेशन र रेल यात्रा रहन्छ2घण्टा.
भन्न हो (हो फ्रेंच) लाई5पेरिसबाट सर्वश्रेष्ठ दिनको यात्राको साथ ट्रेनको साथ यात्रा एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्! कुनै अतिरिक्त, लुकेका शुल्क, कुनै झगडा छैन. रमाइलोको!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू पेरिस बाट रेल यात्रा गर्न” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-travel-train-paris%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#रेस ट्र्याक र समुद्रको बीचमा सुरुचिपूर्ण विलाहरू बनाइएका थिए र डेउभिलको जन्म भएको थियो	#रेस ट्र्याक र समुद्रको बीचमा सुरुचिपूर्ण विलाहरू बनाइएका थिए र डेउभिलको जन्म भएको थियो	#रेस ट्र्याक र समुद्रको बीचमा सुरुचिपूर्ण विलाहरू बनाइएका थिए र डेउभिलको जन्म भएको थियो	#रेस ट्र्याक र समुद्रको बीचमा सुरुचिपूर्ण विलाहरू बनाइएका थिए र डेउभिलको जन्म भएको थियो	#रेस ट्र्याक र समुद्रको बीचमा सुरुचिपूर्ण विलाहरू बनाइएका थिए र डेउभिलको जन्म भएको थियो	युरोप यात्रा	लामो रेल यात्रा	रेल सुझावहरू	रेल यात्रा
10 इटालीमा परी कथा महलहरू तपाईंले भ्रमण गर्नुपर्छ